Vinylidene fluoride (VDF) sida caadiga ah waa mid aan midab lahayn, aan sun ahayn, oo guban karta, waxayna leedahay ur yar oo ether ah. Waa mid ka mid ah monomers muhiim ah oo ka mid ah walxaha polymer-ka sare ee fluoro ee leh jinsiga caadiga ah ee olefin, oo awood u leh polymerizing iyo copolymerizing. Waxaa loo isticmaalaa diyaarinta ee monomer ama polymer iyo falgalka dhexdhexaadka ah.
Heerka fulinta: Q/0321DYS 007
Xabagta FEP (DS602&611)
FEP DS602 & DS611 Taxanaha waa copolymer dhalaali kara ee tetrafluoroethylene iyo hexafluoropropylene oo aan lahayn wax lagu daro oo buuxiya shuruudaha ASTM D 2116. guryaha dielectric, olol hooseeya, caabbinta kulaylka, adkaanta iyo dabacsanaanta, iskudhafan hoose ee khilaaf, sifooyin aan ulo, nuugista qoyaanka dayacan iyo iska caabin cimilada aad u fiican.
FEP Resin (DS610) ee lakabka dahaadhka fiilada, tuubooyinka, filimada iyo fiilada baabuurta
Taxanaha FEP DS610 waa copolymer-ka dhalaali kara ee tetrafluoroethylene iyo hexafluoropropylene oo aan lahayn wax lagu daro oo buuxiya shuruudaha ASTM D 2116. ololka, caabbinta kulaylka, adkaanta iyo dabacsanaanta, iskudhafan hoose ee is jiid jiid, sifada aan dhegta lahayn, nuugista qoyaanka dayacan iyo iska caabinta cimilada heersare ah.
Xabagta FEP (DS610H&618H)
Taxanaha FEP DS618 waa copolymer dhalaalaysa-processible ee tetrafluoroethylene iyo hexafluoropropylene iyada oo aan lagu daro buuxin shuruudaha ASTM D 2116. ololka, caabbinta kulaylka, adkaanta iyo dabacsanaanta, iskudhafan hoose ee is jiid jiid, sifooyinka aan dhegta lahayn, nuugista qoyaanka dayacan, iyo iska caabinta cimilada heer sare ah 5-8 jeer ee resin FEP ee caadiga ah. Waa jilicsan, ka-hortagga dildilaaca, oo leh adayg wanaagsan.
FEP Dispersion (DS603A/C) dahaarka iyo uurka
FEP Dispersion DS603 waa koboleymeriyaha TFE iyo HFP, oo lagu xasiliyay dusha sare ee aan-ionic ahayn.Waxay siisay alaabada FEP oo aan lagu farsamayn karin habab dhaqameed dhowr siyaalood oo gaar ah.
Waafaqsan Q/0321DYS 004
FEP Powder (DS605) dahaarka waalka iyo tuubooyinka, buufinta korantada
FEP Powder DS605 waa copolymer TFE iyo HFP, tamarta isku xidhka u dhaxaysa kaarboonka iyo atamka fluorine waa mid aad u sarreeya, molecule-kana waxaa si buuxda uga buuxsamay atomyada fluorine, oo leh xasillooni kulayl wanaagsan, qallafsanaan kiimiko oo heer sare ah, korantada korantada oo wanaagsan, iyo waxtarka hooseeya hababka wax qabad heerkulbeegga ee is-jiidhidda,iyo qoyaanka ka-hortagga.FEP waxay ilaalisaa sifooyinka jireed ee jawiga ba'an.Waxay bixisaa caabbinta kiimiko heer sare ah oo ay ku jiraan soo-gaadhista cimilada, iftiinka. .Waxa lagu qasi karaa budada PTFE, si loo hagaajiyo waxqabadka mashiinka PTFE.